မိမိကိုယ်ကို ပေးသင့်တဲ့ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် သုံးခု
ကိုယ်တိုင်သေချာမသိဘဲ လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအောင်မြင်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးပြီး နှစ်သစ်တစ်ခုဆီလည်း ဦးတည်နေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ၊ အကျင့်စရိုက်တွေကို ပယ်ချခဲ့ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို တည်ဆောက်ယူသင့်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုရလာဖို့အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို ဘယ်လို မွေးမြူရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
၁. ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချရေးထားပါ။
စိတ်ကူးအကြံအစည်တစ်ခု စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခု ချမှတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အားလုံးကို စာရွက်ထဲမှာ ချရေးထားပါ။ စာရွက်ထဲမှာ အတိအကျ ရေးမှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်စွမ်းအင်နဲ့ ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီကနေမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ သေချာ plan ချရေးလိုက်ပါ။
၂. ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်း ရက် (၃၀) လုပ်ပါ။
အလေ့အထတွေကနေ အလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ အချိန်ပေးပြီး လုပ်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သုတေသနလေ့လာမှုတွေအရ ပညာရှင်တွေအကြံပြုကြတာက အပြုအမူတွေကနေ အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာဖို့ ရက်(၃၀) အချိန်ပေး ကျင့်ယူရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ နာရီဝက် စာဖတ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် ရက်(၃၀)လုံး နာရီဝက် အချိန်ပေးပြီး စာဖတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရက် (၃၀) ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေက အလေ့အကျင့်အဖြစ် သယ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
၃. အကျိုးရလဒ်တွေကို အာရုံစိုက်ပါ။
ကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တွေက ရလဒ်ကောင်းတွေကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်ကောင်းတွေကို မြင်တွေ့ခံစားရတဲ့အခါ နောက်ထပ်အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ မွေးမြူဖို့ ပိုပြီး အားအင်တွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ရလဒ်တွေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို သေချာဂရုတစိုက် မှတ်ထားပြီး တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အပေါ်က အချက်အလက်တွေအတိုင်း လေ့ကျင့်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ အချိန်ကို ကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲတတ်လာမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဖိအားတွေနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းရခြင်းတွေ တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာပြီး အကြံဉာဏ်အသစ်တွေ၊ စိတ်ကူးအသစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ မွေးမြူရင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်စွမ်းအင်ကြောင့် အရာရာကို ပေါ့ပါးတည်ငြိမ်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါးဆီးရီးယားမှ အမေရိကန်တပ်များ ရုပ်သိမ်းခိုင်းသဖြင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နုတ်ထွက်
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးအမေရိကန်မှ တူရကီသို့ လက်နက် ဒေါ်လာ သုံးဘီလျံခွဲ ဖိုး ရောင်းချ